INdumiso 51 Ngaba umfanekiso wokuguquka
Amazwi kaKumkani uDavide anika indlela yabo bonke abafuna ukuxolelwa.
Njengenxalenye yobomi bulumko eBhayibhileni , iiindumiso zinika isibheno sengqondo kunye nobugcisa obubenza bahluke kwezinye iZibhalo. INdumiso 51 ayinjalo. Ebhalwa nguKumkani uDavide ekuphakameni kwamandla akhe, iNdumiso 51 yindlela ebonisa ukuguququka kunye nesicelo esisuka enhliziyweni sokuxolelwa nguThixo.
Ngaphambi kokuba sicinge ngokunzulu kwiindumiso ngokwazo, makhe sijonge ezinye iinkcukacha ezisemvelaphi ezinxulumene nembongo kaDavid.
Umbhali: Njengoko kuchazwe ngentla, uDavid ungumlobi weNdumiso 51. Umbhalo uluhlu lukaDavide njengomlobi, kwaye le mabango ayizange ichithwe kwimbali. UDavide wayengumbhali weendumiso ezininzi, kuquka neendidi ezidumileyo njengeNdumiso 23 ("INkosi ungumalusi wam") kunye neNdumiso 145 ("Inkulu iNkosi kwaye ifanelekileyo indumiso").
Umhla: Indumiso yabhalwa ngoxa uDavide ebudeni bokubusa kwakhe njengoKumkani wakwaSirayeli-kwindawo ethile malunga ne-1000 BC
Iimeko: Njengazo zonke iindumiso, uDavide wayedala umsebenzi wobungcali xa ebhala iNdumiso 51 - kule ngxaki, imbongo. INdumiso 51 yinto ekhethekileyo yokubhaliweyo ngenxa yeemeko eziphefumulelwe uDavide ukuba zibhale ziyaziwayo. Ngokukodwa, uDavide wabhala iNdumiso 51 emva kokuwa kwelokunyanga kwakhe kweBhatshebha .
Ngokucacileyo, uDavid (indoda esatshatileyo) wabona uBhatshebha ehlamba xa ehamba ephahleni lweendonga zakhe.
Nangona uBhatshebha wayetshata yena, uDavide wayemfuna. Yaye ngenxa yokuba wayeyinkosi, wamthabatha. Xa uBhatshebha ekhulelwe, uDavid waya kwangoko ukulungiselela ukubulawa komyeni wakhe ukuze amthathe abe ngumkakhe. (Ungafunda ibali lonke kwi-2 Samuweli 11.)
Emva kwezi ziganeko, uDavide wayejongene nomprofeti uNatan ngendlela engalibalekiyo - jonga 2 uSamuweli 12 malunga neenkcukacha.
Ngethamsanqa, lo mbambano wagqiba uDavid efika engqondweni yakhe kwaye eqonda impazamo yezindlela zakhe.
UDavide wabhala iNdumiso 51 ukuguquka kwisono sakhe aze acele ukuxolelwa nguThixo.
Njengoko sifika kwisicatshulwa, kuyamangalisa ukubona ukuba uDavid akaqali ngobumnyama besono sakhe, kodwa ngo kwenene inceba kaThixo nemfesane:
Ndenzele inceba, Thixo,
ngokwezenzo zakho zothando;
ngokwenceba yakho enkulu
cima zam izigodo.
2 Geza konke ubugwenxa bam
ndihlambulule esonweni sam.
INdumiso 51: 1-2
Iindinyana zokuqala zivelisa enye yeengqungquthela ezibalulekileyo zeemhubo: Umnqweno kaDavide wokuhlanzeka. Wayefuna ukuhlanjululwa kwiqhenqa lesono sakhe.
Nangona wayecela ukuba inceba, uDavide akazange athathe amathambo malunga nobugwenxa bezenzo zakhe noBhatshebha. Akazange azame ukuzithethelela okanye ukuphazamisa ubunzima bezenzo zakhe. Kunoko, wavuma ngokucacileyo ububi bakhe:
Ngokuba ndiyazi izigwenxa zam,
kwaye isono sam sihleli phambi kwam.
4 Ngonene wena, ndedwa, ndonile
wenze okubi emehlweni akho;
ngoko ulungile kwisigwebo sakho
kwaye ulungele xa ugweba.
5 Ngokuqinisekileyo ndandisisono ekuzalweni,
wesono ukususela ngexesha umama endikhulelwe.
6 Nokuba uthanda ukuthembeka phakathi kwesisu;
undifundise ubulumko kuloo ndawo eyimfihlo.
Phawula ukuba uDavid akazange akhulume ngezono ezithile azenzileyo-ukudlwengula, ukukrexeza, ukubulala, njalonjalo. Oku kwakuyinto eqhelekileyo kwiingoma kunye neengoma zemihla yakhe. Ukuba uDavid wayecacile ngezono zakhe, ke indumiso yakhe yayiza kusebenza malunga nomnye umntu. Ngokuthetha ngesono sakhe ngokwemiqathango jikelele, nangona kunjalo, uDavid wavumela abaphulaphuli abaninzi ukuba badibanise ngamazwi akhe baze bahlanganyele nomnqweno wokuguquka.
Qaphela kwakhona ukuba uDavide akazange axolise kuBhatshebha okanye umyeni wakhe kwisicatshulwa. Endaweni yoko, wathi kuThixo, "Kuwe, ndona, ndonile, wenza okubi emehlweni akho." Ngokwenza njalo, uDavid wayengenakukunyamekela okanye ukuphazamisa abantu ayebenzileyo. Kunoko, ngokuqinisekileyo wayeqonda ukuba bonke abantu babone isono kwaye baqala ukuvukela uThixo. Ngamanye amazwi, uDavidi wayefuna ukujongana nezimbangela kunye nemiphumo yokuziphatha kwakhe kwesono - intliziyo yakhe yesono kunye nesimo sakhe sokuhlanjululwa nguThixo.
Ngokuqinisekileyo, siyazifunda kwiindinyana ezongezelelweyo zeZibhalo uBatsheba kamva waba ngumfazi osemthethweni wenkosi. Kwakhona ungumama wendlalifa kaDavide: uKumkani uSolomon (bona 2 Samuweli 12: 24-25). Akukho nanye yeso sizathu sokuziphatha kukaDavide ngandlela-thile, kwaye akuthethi yena noBhatshebha babenothando lobuhlobo. Kodwa oko kuchaza umlinganiselo wokuzisola nokuguquka kwisabelo sikaDavide kumfazi ayemonile.
7 Ndihlambulule ngehisope, ndihlambuluke;
ndihlambe, ndibe mhlophe ngaphezu kwekhephu.
8 Makhe ndive uvuyo novuyo;
9 Fihla ubuso bakho ezonweni zam
ndiwususe konke ubugwenxa bam.
Oku kuthethwa nge "hssop" kubalulekile. I-Hyssop isityalo esincinci, esisiqhelo esakhula eMiddle East - inxalenye yentsapho yezityalo yezityalo. KwiTestamente Elidala, ihisophi isimboli sokuhlambuluka nokucoca. Olu xhumano lubuyela kumaSirayeli ngokuyisimangaliso aphunyuke eYiputa kwiNcwadi yeEksodus . Ngomhla wePasika, uThixo wawayalela amaSirayeli ukuba atyebe iingcango zomnyango wezindlu zawo ngegazi lemvu usebenzisa isiqu sehisope. (Funda iEksodus 12 ukufumana ibali elipheleleyo.) I-hyssop yayiyinxalenye ebalulekileyo yemigangatho yokuhlanjululwa kwintente yamaYuda kunye netempile - khangela uLevitikus 14: 1-7, umzekelo.
Ngokucela ukuba acocwe ngehisopu, uDavide wayephinde avume isono sakhe. Kwakhona wayevuma amandla kaThixo okuhlamba isono sakhe, amshiye "abe mhlophe ngaphezu kwekhephu." Ukuvumela uThixo ukuba asuse isono sakhe ("ukucima konke ubugwenxa bam") kuya kuvumela uDavid ukuba aphinde abe novuyo novuyo.
Okuthakazelisayo, lo Msebenzi weTestamente Endala wokusebenzisa igazi lokubingelela ukususa ibala lezono ngokugqithiseleyo kumbingelelo kaYesu Kristu. Ngokuphalaza kwegazi lakhe emnqamlezweni , uYesu wavula umnyango kubo bonke abantu ukuba bahlambuluke kwisono sabo, basishiye "bodwa ngaphezu kwekhephu."
Ndenzele intliziyo ehlambulukileyo, Thixo,
kwaye uvuselele umoya oqinile ngaphakathi kwam.
11 Musa ukundishiya ebusweni bakho
okanye uthathe uMoya oyiNgcwele kum.
12 Buyisela kum uvuyo wosindiso lwakho
kwaye undiphe umoya ozimisele, ukuze undigcine.
Kwakhona, sibona ukuba umxholo omkhulu weengoma zikaDavide ngumnqweno wakhe wokuhlanzeka - "intliziyo ecocekileyo." Lo wayeyindoda (ekugqibeleni) yakuqonda ubumnyama nobuqhetseba besono sakhe.
Njengoko kubalulekile, uDavide akazange afune kuphela ukuxolelwa ngenxa yeziphambeko zakhe zakutshanje. Wayefuna ukutshintsha lonke ulwalathiso lobomi bakhe. Wancenga uThixo ukuba "ahlaziye umoya oqinileyo ngaphakathi kwam" kwaye "undiphe umoya wokuthanda, undondise." UDavide waqonda ukuba wayelahlekile ebuhlotsheni bakhe noThixo. Ukongezelela ekuxoleleni, wayefuna uvuyo lokuba nobuhlobo obunokubuyiselwa.
13 Ndiya kubafundisa abaphambukayo iindlela zakho,
ukuze aboni bebuyele kuwe.
14 Ndihlangule kwintyala yegazi, Thixo,
wena unguThixo wam uMsindisi,
Ulwimi lwam luya kucula ngobulungisa bakho.
Vula umlomo wam, Nkosi,
Umlomo wam uya kukuvakalisa indumiso yakho.
16 Awuyikuvuyela umbingelelo, okanye ndingayizisa;
awukuvuyela imibingelelo etshiswayo.
17 Umnikelo wam, Thixo, umoya ophukileyo;
intliziyo ephukile neyaluhlungu
Wena, uThixo, akayi kuwudeka.
Eli li candelo elibalulekileyo le ndumiso kuba libonisa udidi lukaDavide oluphezulu lokuqonda kwisimo sikaThixo. Naphezu kwesono sakhe, uDavide wayesaqonda oko uThixo akuxabisa kulabo abamlandelayo.
Ngokukodwa, uThixo uxabisa ukuguquka okunene kunye nokunyamekela ngokusuka enhliziyweni kunemihla ngemihla kunye nemithetho esemthethweni. UThixo uyavuya xa siva ubunzima besono sethu - xa sivuma ukuvukela kwethu kunye nomnqweno wethu wokubuyela kuye. Ezi nkolelo zentliziyo zibaluleke ngakumbi kuneenyanga kunye neminyaka "yokwenza ixesha elide" kwaye sithandaza imithandazo ngenzame yokufumana indlela yethu yokubuyela kwiintsikelelo zikaThixo.
18 Ngamana kukukholisa ukuba uphumelele iZiyon,
ukwakha iindonga zaseYerusalem.
19 Uya kwandula uvuyo ngemibingelelo yabalungisa,
neminikelo etshiswayo epheleleyo;
ke iinkunzi zeenkomo ziya kunikelwa esibingelelweni sakho.
UDavide waphetha isigumiso sakhe ngokuncenga iYerusalem nabantu bakaThixo, amaSirayeli. NjengoKumkani wakwaSirayeli, oku kwakuyinxalenye ephambili kaDavide-ukunyamekela abantu bakaThixo kunye nokukhonza njengenkokeli yabo yokomoya. Ngamanye amazwi, uDavide wagqiba yakhe indumiso yokuvuma nokuguquka ngokubuyela kumsebenzi uThixo ambizele ukuba akwenze.
Yintoni esinokuyifunda kumagama anamandla kaDavide kwiNdumiso 51? Makhe ndiveze imigaqo emithathu ebalulekileyo.
Ukuvuma nokuguquka kuyimfuneko ebalulekileyo yokulandela uThixo. Kubalulekile ukuba sibone indlela uDavide acele ngayo ukuxolela uThixo xa eqonda ngesono sakhe. Kungenxa yokuba isono ngokwawo sinzulu. Isahlukanisa noThixo kwaye siholele emanzini amnyama.
Njengoko abo balandela uThixo, simele sivume izono zethu kuThixo rhoqo size sifune ukuxolelwa kwakhe.
Simele sizive sisisindo sesono sethu. Ingxenye yenkqubo yokuvuma nokuguquka kuthatha isinyathelo sokubuya ukuze sihlolisise ngokwenza isono. Sidinga ukuziva inyaniso yokuvukela kwethu uThixo kumgangatho wemoya, njengoko kwenza uDavide. Asinakuphendula loo mvakalelo ngokubhala imibongo, kodwa kufuneka siphendule.
Sifanele sivuyiswe ngokuxolelwa kwethu. Njengoko sibonile, umnqweno kaDavide wokuhlambuluka ngumxholo omkhulu kule ndumiso - kodwa ke uvuyo. UDavide wayethembekile ekuthembekeni kukaThixo ukuxolela isono sakhe, kwaye wayehlala evuyiswa ngethemba lokuhlanjululwa kwizono zakhe.
Kwixesha langoku, ngokufanelekileyo sijonga ukuvuma nokuguquka njengemicimbi ebalulekileyo. Kwakhona, isono ngokwawo sinzulu. Kodwa abo bethu abaye bafumana usindiso olunikezwa nguYesu Kristu banokuvakalelwa nje ngokuba benethemba njengoDavide ukuba uThixo sele esele esithethelele izono zethu. Ngoko ke, siyavuya.
4 Iintlobo Zothando eBhayibhileni
UYesu uphilisa ngeSabatha, abaFarisi baxelisa (Marko 3: 1-6)
Izifundo Ezivela Kwimbali kaSamson noDelila
Ukuzinikezelwa kwabantwana: Imfundiso yeBhayibhile
'Isiqulatho seNkqutyana yeeNkwenkwezi zeNkanyezi'
Ngaba Ndifumene I-Dinosaur Egg?
18 Abavakalisi be-Disney Ababethelela i-Splash Intaba
Amanqaku amahle kakhulu kuMariah Carey
'Vilja Lied' Iingoma, IsiNgesi Ukuguqulelwa, kunye nokuBoniswa kweeNgxelo
I-Montana State University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Biography kaCharlotte Brontë
IHalide Ion Inkcazo kwiKhemistry
I-Trunk-okanye-Yenza umsebenzi weHalloween
Imisebenzi emibi kunazo zonke eziPhambili zeBlack Rock Bands
I-Brick - I-Clunker enomsindo weBhotela
Imibuzo emangalisayo malunga neTitanic
Iindlela ezilishumi zokuphuma kwikhatywayo
I-Admissions yeYunivesithi yaseBuena Vista